12 Munamato Points YeRusununguko | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato 12 Yekunamata Points YeRusununguko
Nhasi, isu takatungamirwa nemweya waMwari wekuita nawo munamato werusununguko. Ichi ndicho chikonzero tiri kupa minyengetero gumi nemiviri yerusununguko. Mwari anoda kusunungura vanhu vake kubva pasimba rerima rinotambudza hupenyu hwavo. Semutendi, kukosha kwerusununguko hakugone kusimbiswa. Kana iwe uchifanira kuita zvisungo zvako zvinobudirira semutendi, unofanirwa kusunungurwa kubva kune zvimwe zvinhu.
Mutendi haakwanise kushandira Mwari zvirinani kana vari muhuranda. Kwemakore vana vaMwari vaisakwanisa kushumira Jehovha. Kwete nekuti ivo vanosarudza kwete, asi nekuti vakasungwa mukutapwa. Vapambi vavo havashumire Jehovha, saka vakamanikidzwa kuti varege kudana kuna Jehovha. Mwari vanonzwisisa kuti murume anoda imwe nhanho yerusununguko kuti ashumire nemazvo. Ndosaka Mwari vakaudza Mosesi kuti aende kuIjipita kunotaurira Pharoah kuti arege vanhu vangu vaende kuti vanomushandira zvirinani.
Saizvozvo, vatendi vazhinji vachiri muEjipitori nanhasi. Ivo havasati vasununguka parizvino. Vamwe vatendi vazhinji varanda vechivi. Vamwe vatendi vanogona kuita vasina kuita upombwe, kutaura nhema, kuita hupombwe, uye nemhando dzose dzezvinhu zvakaipa. Vakaitwa musungwa wechivi. Vamwe vatendi varanda vehurwere. Vakaedza zvese zvinobvira, asi hurwere uhwu hahuperi. Izvi zvakavabata vasingakwanise kuita mabasa avo zvinobudirira sevaKristu.
Zvisinei nezviri kukubata pasi nhasi, chinofadza ndechekuti Mwari anoda kupa rusununguko kuvanhu. Mwari anoda kununura vanhu vake kuti vamushumire zvakanaka. Ndinokuzivisa nhasi kuti zuva rako rerusununguko rasvika. Kunyangwe dambudziko rako nehusungwa zvikagara kwehusiku nemangwanani, rusununguko rwako ruchapenya senyeredzi dzemangwanani. Ini ndinodudza nemasimba edenga, simba rega riri kubata pasi sevaranda, masimba akadaro anofanira kurasikirwa nemasimba nhasi muzita raJesu.
Nekuti zvakanyorwa kuti, uyo akasunungurwa nemwanakomana akasununguka zvirokwazvo. Ndinotaura rusununguko rwako kuva rwechokwadi muzita raJesu. Kubva nhasi, hapana simba richakwanisa kukubatisa pasi. Wakasimbiswa kubva pasimba uchienda pane rimwe zita muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinokutendai nenyasha dzemwanakomana wenyu Jesu Kristu. Ndinokutendai nerudo rwakatidaidza kuti tibve murima mupinde muchiedza chinoshamisa chaMwari. Ndinokutendai nekuregererwa kwehupenyu hwedu kubva mugomba rerufu uye nekuponeswa kwemweya yedu. Zita renyu ngarikwidziridzwe muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinonamata kuti mundibatsire kusimbisa rusununguko rwangu muzita raJesu. Simba rega rega rerima rinotyisidzira rusununguko rwangu rinowira kurufu nhasi muzita raJesu.
Ndinobvisa masimba ese pahupenyu hwangu, ndichibatira moto muzita raJesu. Ndinozvisunungura kubva pazvisungo zvese zveuranda. Mhete dzose neketani dzehusungwa dzave kushandiswa kundibata pasi dzakadamburwa muzita raJesu.
Moto unodambura, Tenzi, nhapwa dzose dzehurwere muhupenyu hwangu muzita raJesu. Ndinozvisunungura kubva pahusungwa hwese hwehurwere muzita raJesu. Rugwaro runoti nemutsara wake; taporeswa. Ndinotaura kuporesa kwangu kune chokwadi nhasi muzita raJesu.
Ishe, ndinogashira rusununguko pamusoro pesimba rechitadzo. Nekuti zvakanyorwa kuti uyo wakafa wasunungurwa pachivi. Ini ndinofa naKristu nemuzita raJesu, uye ndavandudzwa muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinouya kuzorwa nemaketani ese ezvitadzo nekusarurama. Rugwaro rwunoti ndirwo rusununguko rwakagadzwa naKristo kukwazisa. Ngatisimukei takasimba mukudaidzwa kuti tirege kuva varanda vechivi zvakare. Ishe, ndinoramba kuva muranda wechivi nemuzita raJesu. Ndinotaura rusununguko rwangu kune chokwadi nesimba muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinonamata kuti mweya wenyu ufukidze hupenyu hwangu nemuzita raJesu. Chinyorwa chinoti kana mweya waiye akamutsa Kristu kubva murufu ukagara mauri, unomutsa muviri wako unofa. Ishe, ndinonamata kuti mweya wenyu uuye nesimba nemuzita raJesu.
Ishe Jesu, nekuti izvo, zvakanyorwa, Zvino Ishe ndiye Mweya, uye pane Mweya waIshe pane rusununguko. Kubva ikozvino, ini ndinotanga kufamba mumumvuri wemweya muzita raJesu. Bhaibheri rinoti kune mweya waMwari; pane rusununguko. Ndinotanga kufamba musimba remweya mutsvene nemuzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinogamuchira simba rekuziva chokwadi. Chinyorwa chinoti ndichaziva chokwadi, uye chokwadi chinondisunungura. Baba Tenzi, ndinoramba kushanda mukunyepa kana kusaziva kuti Kristu ndiani. Kubva nhasi, ndinonamatira njere nekuzarurirwa kwaMwari muzita raJesu.
Ishe, rugwaro runoti Kubva pakutambudzika kwangu ndakadana kuna Jehovha. Ishe akandipindura ndokundisunungura. ” Ishe, ndipindurei nhasi muzita raJesu. Ndinonamata kuti muchandisunungura nemaoko enyu ane simba muzita raJesu.
Mweya waIshe Jehovha uri pamusoro pangu. Nekuti Jehovha akandizodza kuti ndiuye nenhau dzakanaka kune vanotambudzika; Akandituma kuti ndirape vane mwoyo yakaputsika, kuti ndiparidze rusununguko kuna vakasungwa uye kuti vasungwa vasunungurwe. ” Kubva nhasi, ndiri kuzivisa sununguko muzita raJesu.
Nekuti zvakanyorwa, chisimbisa chinhu, uye zvichasimbiswa. Ishe, ndinotaura rusununguko rwangu muchokwadi nemuzita raJesu. Ini ndinoramba kuramba ndichiumburuka muhuranda hune chepfu muzita raJesu. Bhaibheri rinoti kana mwanakomana akakusunungura, wakasununguka zvirokwazvo. Ndinosimbisa rusununguko rwangu neropa raKristu muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kupokana Kukahadzika Pfungwa
inotevera5 Minyengetero Yemunamato Yemurume Anofeva
Edina Mamvura Nyamavhuvhu 20, 2021 At 11:56 am
Ah hongu ndinotaura rusununguko rwangu muzvokwadi muzita raJesu Anesimba.
Innocent Buchi Nyamavhuvhu 23, 2021 At 5:00 am
Ndinokutendai JESU nekupodzwa kwangu.